Ungadlulisa kanjani "Izinyoni Ezimbi"? Amathiphu kanye nezimfihlo zabadlali abanamakha
Amakhompiyutha, Imidlalo yekhompyutha
"Izinyoni ezithukuthele" ngakwesokudla zingabizwa ngokuthi i-computer ewuthandwa kakhulu yikhompyutha kanye nesicelo esithengisa kakhulu i-iPhone ngaso sonke isikhathi. Cabanga nje: sichitha amaminithi angaba yizigidi ezingu-200 ngosuku ngosuku lokushayela izinyoni.
Kodwa lokhu akulona lula njengoba kungase kubonakale ekuqaleni. Abasebenzisi abaningi ngokushesha noma kamuva umbuzo uvela: "Ungadlula kanjani izinyoni ze-Angry?". Futhi wonke umuntu unezindlela zakhe siqu - kusuka eselulekweni esilula kuya emfihlekweni eyimfihlo kakhulu yokudlulisa umdlalo.
Okokuqala, ake sibone ukuthi umdlalo we-Angry Birds usuphi. I-gameplay ibonisa umzabalazo ongapheli we "izinyoni-ngokumelene nezingulube", futhi umsebenzi wakho ukukhipha ama-kamikaze birdies emibhoshongweni yengulube.
Ukuze uvule ezingeni elilandelayo, udinga nje ukubulala zonke izinyoni. Kodwa uma ufuna ukuthola amaphuzu amaningi (izinkanyezi ezintathu esigabeni ngasinye), khona-ke kudingeka udinga izikhulu eziphakeme. Isihluthulelo samanani aphezulu ku-Angry Birds ingumphumela wokusebenza okubulalayo (amabhasi angasetshenzisiwe akulethele ngokuzenzakalelayo amaphuzu angu-10,000 ngamunye) nomonakalo ononya (hlukanisa izinto eziningana ngesikhathi ukushaya amaphuzu ngokushesha).
Ngokuqinisekile uzosebenzisa amasu womabili ngesikhathi esifanayo, nakuba wazi: usebenzisa inombolo encane yezinyoni, ngeke ukwazi ukuthola zonke izinkanyezi ezintathu, uma ungazange udale umonakalo omkhulu ezitheni.
Ungadlulisa kanjani izinyoni ezimbi? Landela ibhalansi bese ubala ngokunembile amandla okuthinta. Isu eliphumelelayo kakhulu ukuhlasela kwezindonga ezibuthakathaka, kunokudubula okuyimpumputhe ezingxenyeni eziyinhloko, eziqinile kakhulu zombhoshongo. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinto zisebenza ngamandla kunezinye. Nasi isibonelo esilula: ungachithi cishe ama-hits amathathu okuqondile ukuze uphule i-block block. Kulula kakhulu ukugxila kwipulatifomu lezitshalo eliqothulwa kalula.
Ngaphambi kokuba uhambe ngezinyoni ze-Angry, udinga ukwazi: zonke izinyoni zezinyoni zinamandla okhethekile, ngaphandle kwezinyoni ezincane ezibomvu ezihamba nje lapho ukhomba khona. Ngemuva kokuqala inyoni ephuzi, ungathinta isikrini ukusheshisa indiza yayo. Lokhu kuzokwenza umonakalo omkhulu, ikakhulukazi ezakhiweni zokhuni. Izinyoni ezimnyama nezimhlophe eziphonsa amabhomu namaqanda ziyasebenza kakhulu ekubhujisweni kwamadwala namadwala. Futhi inyoni ngayinye eluhlaza okwesibhakabhaka ekuqaleni ihlukaniswe yaba yizintathu, futhi ayikwazi ukuthola okulingana nomonakalo eqhweni. Ngakho-ke, ukuthembela ezinhlobonhlobo zezinyoni, uzosebenzisa igobolondo elincane, ubangele umonakalo omkhulu futhi ufinyelele kalula ezingulube.
Amathiphu ambalwa ambalwa
Esikrinini sokuthinta ifoni, ungakwazi ukusondeza noma ukuphuma kalula ngeminwe emibili. Sebenzisa lokhu ukuze impi yonke ibe ngaphakathi kwesikrini esifanayo. Ngakho-ke ungabona masinyane ukuthi kude kangakanani i-catapult yakho ivela ezingxenyeni zezingulube.
Inyoni ngayinye ishiya umkhondo ophawulekayo ngemuva kwayo. Ngakho-ke ungaphinda uphonsa ngempumelelo, noma, ngokuphambene, ulungise kancane kancane endleleni efanele.
Akudingekile ukuba uhlasele kusukela kwesobunxele kuya kwesokudla: uma ngabe umgomo wakho uphakeme ngokwanele, ungaphonsa i-birdie ngenhla. Le nqubo ilungele amazinga anezindonga, kodwa ihlehla phansi ophahleni oluqinile.
Linda kuze kube yilapho i-projectile yakho yangaphambilini idlulela ngokuphelele. Uma ungena enyangeni yokugcina, ukuhlaselwa okubhaliwe ngokucophelela kuzosulwa.
Amanye amathiphu namasu okuyimfihlo yenguqulo ngayinye yomdlalo yabo, njengama-Angry Birds Seasons. Le ndima incike ekutheni kufanele ubulale zonke izingulube noma ama-lemurs ukuze udlule ngalinye izinga. Zivikelwe izakhiwo ezehlukene - izindonga zekhonkolo, amabhlogo enkuni noma amatshe amatshe. Ngaphezu kwalokho, ezinye izingulube zimbethe izingubo zokuvikela nezigqoko. Akungasho ukuthi elinye icebo liyadingeka lapha kunokuhlasela okuqondile. Umdlali ngamunye unayo eyakhe.
Ungadlulisa kanjani izinyoni ezimbi? Manje uyazi impendulo yalo mbuzo.
Ngokuningiliziwe mayelana nokwenza umbuthano "ku-Maynkraft"
Ungaba kanjani umbulali? Umlando we-Order of Assassins ku-AssassinsKukhona
Imininingwane mayelana nokwenza umlilo "ku-Maynkraft"
Uma i-Nox App Player ingaqali, kufanele ngenzeni?
Amaphilisi imvubelo Brewer sika
Iyini Imimoya evela futhi kwakhiwa kanjani
Ama-antibiotic "Zinnat": yokusetshenziswa zomuthi Kuyakhuthaza
Izikhangibavakashi: Ibanga kusuka Kazan ukuba Cheboksary
Ukulungiselela iholide. Bermuda
Indlela Pheka khachapuri. zokupheka
Aphambe Udinga Ukuze Speed Carbon, kanye nokusetshenziswa yabo
Ataxia Friedreich sika: Izimpawu, Sifo Nokuselapha
"Porto Franco": incazelo, ikheli, ukubuyekezwa
Placentation okuphansi ekukhulelweni: izimbangela, imiphumela kanye neziphakamiso
Biorevitalization "Akvashayn": libuyekeza cosmetologists, ikakhulukazi izinqubo